Web Camera နှင့်ကွဲပြားသောမိုက်ကရိုဖုန်းတို့ဖြင့် iMovie အတွက်အသံသွင်းခြင်း Martech Zone
ဤသည်မှာလူကြိုက်အများဆုံးရေးသားချက်များဖြစ်သည် Martech Zone စီးပွားရေးနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများကို အသုံးချ၍ အွန်လိုင်းအာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကို ဦး တည်ရန်အတွက်မောင်းနှင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ iMovie သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့်ဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းတွင်အခိုင်အမာအရှိဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ပြီးတော့၊ ငါတို့အားလုံးသိရတာကမလိုအပ်တဲ့နောက်ခံဆူညံသံအမျိုးမျိုးကိုလက်တော့ပ်ကင်မရာ (သို့) ဝက်ဘ်ကင်မရာကနေအသံဖမ်းယူတာဟာအလွန်ဆိုးရွားလှတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်၏ဗီဒီယိုများအားလုံးကိုထူးခြားစေလိမ့်မည်။ ငါ့ရုံးခန်းထဲမှာငါတစ်ခုအသုံးချ Audio-Technica AT2020 Cardioid Конденсаторစတူဒီယို XLR မိုက်ခရိုဖုန်း ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု Behringer XLR ကို USB Pre-amp သို့ထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းသည်ကြွယ်ဝသောအသံကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးနောက်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသောအသံကဲ့သို့သောမည်သည့်နောက်ခံဆူညံသံကိုမဆိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါ့ဗီဒီယိုအတွက်, ငါရှိသည် Logitech BRIO Ultra HD Webcam။ ၎င်းသည် 4k တွင်မှတ်တမ်းတင်ရုံသာမက၎င်းသည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဗွီဒီယိုတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ညှိနှိုင်းမှုများစွာရှိသည်။
iMovie သည်အကန့်အသတ်ရှိသည် - သင့် built-in ကင်မရာဖြင့် FaceTime မှမှတ်တမ်းတင်ရန်သာဖြစ်သည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာ၊ အလွန်ကွဲပြားသောအသံထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှသင်မဖမ်းယူနိုင်ပါ။
Ecamm Live Virtual ကင်မရာကလုပ်သည်။
ခေါ်အချို့မယုံနိုင်စရာ software ကိုအသုံးပြုခြင်း Ecamm တိုက်ရိုက်လွှင့်, ယင်း အကြွင်းမဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ် Ecamm Live သည်သင်ကိုဖွင့်နိုင်သည် ကို virtual ကင်မရာ OSX တွင် iMovie အတွင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တက်ပစ်ခတ် Ecamm တိုက်ရိုက်လွှင့် သင်၏ဗီဒီယိုဆက်တင်များအားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ခြင်းများနှင့်သင်၏အသံထုတ်လွှင့်စက်ကိုလည်းမြေပုံဆွဲနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ Behringer XLR ကိုကျွန်ုပ်၏ကျွန်ုပ်၏ Audio Technica မိုက်ကရိုဖုန်းချိတ်ဆက်ထားသော USB preamp သို့ညွှန်ပြသည်။
သင်၏ဗီဒီယိုနှင့်အသံကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းရရှိပါက iMovie ရှိကင်မရာမှတင်ပို့သောဗီဒီယို (အောက်သို့မြှား) ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဆို ... အခုသင်ဗွီဒီယိုကို iMovie project ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရွေးပြီးရွေးနိုင်သည် Ecamm တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကင်မရာ ရင်းမြစ်အဖြစ်!
သင်၏ဗီဒီယိုနှင့်အသံကိုအလေးအနက်ထားလိုလျှင် Ecamm Live သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ Microsoft Teams ကအဲဒါကိုကင်မရာလို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါက Microsoft ပြissueနာမဟုတ်ဘဲ Ecamm Live ပြissueနာပါ။
ယနေ့ Ecamm ကိုဝယ်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ဤဆောင်းပါးတလျှောက်လုံးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် Ecamm Live ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ကျွန်ုပ်၏တွဲဖက်လင့်ခ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: 4k ဝက်ဘ်ကင်မရာပန်းသီးအသံနည်းပညာbehringerEcamm အသက်ရှင်သည်ရှုခင်းFaceTimeiMovieLogitech brioLogitech BRIO ဝက်ဘ်ကင်မရာမိုက်ခရိုဖုန်းmicrosoftOSXဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းမိုက်ကရိုဖုန်း Shurexlrxls မိုက်ခရိုဖုန်း
21:2021 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 15
ဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ဒေါက်ဂလပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနာဂတ်အသံဖမ်းစက်မှာဒီဟာကိုသုံးနိုင်တယ်။ အရင်ကငါ record-screen.com ကိုအသုံးပြုပြီးမှတ်တမ်းတင်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာလိုဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးဖို့အကောင်းဆုံးကိရိယာကဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ iMovie ကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
စက်တင်ဘာ 4, 2021 မှာ 1: 27 AM
Ecamm သည်ဆော့ဝဲကောင်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းစျေးနှုန်းသည်ရယ်စရာကောင်းသည်။ စျေးသက်သာသောဗားရှင်းအတွက်တစ်လ ၁၆ ဒေါ်လာသည်ရူးသွပ်ရုံသာရှိသည်။
9:2021 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 07 မှာ
လေးစားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူ။ ၎င်းသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ သူတို့က OSX နဲ့အသံနဲ့ဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲအားလုံးကိုလိုက်မီဖို့အရမ်းတော်ပါတယ်။ ငါ့ ၂ ဆင့်သာရှိသည်။